Chenjerera Apple! Google inogadzirira kusvika kweiyo new watchOS | Ndinobva mac
Google inozviziva uye humbowo hwazvo ndechekuti ivo vatangisa nyowani yekuvandudza yeiyo Wear OS pamberi peavo veCupertino vasiya vasina kugadzwa newatchOS izvo zvichauya zvakaiswa mukati memukati meiyo nyowani Apple Watch iyo ichaunzwa munaGunyana.
Vese vateveri vekambani neakarumwa apuro, kunyangwe paine zviitiko zvekuti software yatadza nekuda kwemamiriro asina kumboitika, Takamirira kuti vhezheni itsva yeApple Watch isunungurwe.
Google yakazivisa inogadziridza kuWear OS, yayo inoshanda masisitimu akachenjera. Iyo nyowani system inotsvaga dhizaini nyowani inopa nekukurumidza kuwana kune ruzivo uye zviziviso, rwunoita zvakanyanya kuita rubatsiro kubva kuGoogle mubatsiri uye nehungwaru hutano hwekudzidzisa.
Pasina mubvunzo network yemasaiti iri kutanga kupisa nekuti hapana zuva iro iro ruzivo rwune chekuita nezvichaitika mumazuva mashoma risingawanikwe, kunyanya muna Gunyana 12. Apple haisati yatumira kukokwa kunhau kusimbisa musangano, asi vaongorori vese vanobheja pazuva iro.
Iye zvino zvinongoramba zvichingoona izvo zvinonyatsoratidzwa neApple mune iyo Keynote asi isu tine chokwadi chekuti mushandirapamwe weKisimusi uchavimbiswa nenzira hombe. Zvese zvigadzirwa zvavanopa zvinogona kuwanikwa mumushandirapamwe weKisimusi, kana izvi ndizvo zvatinotenda tese. Tichava neApple here Mhemberero dzeChirongwa 4 kuSpain? Spain icharamba ichienderera pane runyorwa rwenyika uko LTE paApple Watch ichiri kurota here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chenjerera Apple! Google inogadzirira kusvika kweiyo new watchOS